Shiinaha 20 litir bacda shaandhada ku leh warshadda sanduuqa iyo alaab-qeybiyeyaasha. Kaiguan
Bacda sheerka ku jirta sanduuqa
Weelka biyaha ee la kala qaadi karo
Jerry Can oo Semi-burburin kara
Ku saabsan KAIGUAN
Tubada / Tuubada
Cuntada LDPE cubitainer
20 litir bacda shaandhada ku jirta sanduuqa
Bacda sheer ee sanduuqa ku jirta waa weel cusub oo isku daraya dabacsanaanta Bacda Sanduuqa iyo faa'iidooyinka hagaagay ee weelasha adag ama adag, taas oo ka dhigaysa bedelka ugu habboon dhammaan xulashooyinkaas. Waxay ka kooban tahay jubbadda-qaabeeya, bac balaasti ah oo lakabyo badan leh, qasabad, dabool ama waalka iyo kartoon kartoon ah.
Boorsadeena shaandheynta ku jirta sanduuqa waxaa laga sameeyay balaastiik badan. Lakabka kore (polyamide + polyetylen) wuxuu ka ilaaliyaa oksijiinta iyo qoyaanka; cufnaanteeda iyo halabuurkeedu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran hadba baahida macmiilka ama sheyga. Lakabka gudaha (polyetylen) waa mid laastik ah una adkaysanaya jeexitaanka.
Cheertainers-ka ayaa ugu fiican in loo isticmaalo dareeraha iyo dareeraha dareeraha ah.
Waxaana loo isticmaali karaa cuntada iyo waxyaabaha cabitaanada, sida iniin shiidan, suugada, khalka, Jabaan darteed, caanaha, casiirka, khamriga, biirka, iwm
Waxay hoy u noqon kartaa kiimikada, oo ay ku jiraan xabagta, beeraha, saabuunta dharka, saxafiyiinta, saliidaha, rinjiyeyaasha, dahaadhka, batroolka, dareeraha bacriminta, milix, fayodhowrka, aalkolada, jeermiska loo yaqaan 'hypochlorous acid disinfectant, diluent, ultrasound gel, hematology reagent iwm.
Waxyaabaha la isku qurxiyo iyo waxyaabaha daryeelka shakhsi ahaaneed, sida nadiifiyeyaasha, shaambo, saabuunta dareeraha ah, qaboojiyaha, looshinnada ayaa si aad ah ugu shaqeeya bacaha foomka ku habboon ee shaashadda leh.
Weelka ayaa ah mid aad u fudud oo fudud in la maareeyo.
Shayga ayaa laga ilaaliyaa iftiinka iyo hawada, taas oo u oggolaanaysa inay ilaaliso dhammaan hantidiisa illaa inta gebi ahaanba la isticmaalayo.
Naqshaddiisa aan xaddidneyn waxay u oggolaaneysaa 99% dareeraha in la faaruqiyo.
Qulqulka wax soo saarku waa mid joogto ah oo joogto ah, oo aan lahayn goobooyin hawo ah ama buufin.
Boorsada ayaa weli gabi ahaanba ka dhaqaaqda sanduuqa gudihiisa, taas oo ka hor istaageysa furka dhaqaaqa inta lagu guda jiro gaadiidka.
Hoos udhac weyn kuyimid isticmaalka balaastigga marka loo barbardhigo weelasha adag.
Yaraynta mugga baakadka, markay madhan tahay iyo markay buuxdo labadaba.
Keyd badan oo ku saabsan booska iyo kharashka saadka iyo deegaanka.
Sanduuqa kartoonka ayaa u oggolaanaya aagga ballaaran ee isgaarsiinta garaafka.
Taageero farsamo iyo qaabeyn qaabaysan.
Cheertainer-ku maaha boorsadaada caadiga ah. Waxay siisaa macaamiisha naqshad xirmo ah oo ka sarreysa dhismaha barkimooyinka iyadoo la adeegsanayo. Loo sameeyay si loo sameeyo qaabka sanduuqa, Cheertainer-ka shatiga leh ayaa u gaar ah nashqadeyntiisa iyo dhismihiisa. Lagu soo saaray gussets dhinac ah oo "qaab ku habboon" weelka, Cheertainer wuxuu u oggolaanayaa bilaash qulqulaya dhammaystiran oo bilaash ah.
Sanduuqa ayaa qaab loogu talagalay. Maaddaama ay ka samaysan tahay kartoon, dhammaan dhinacyada waa la daabacan karaa, taas oo siinaysa xiriir ballaadhan iyo xayeysiin ballaadhan.
Waxay leedahay noocyo badan oo joojiyayaal ah, xiritaanno iyo fureyaal.
Hore: Qiimaha jumlada 2020 Kaydka Biyaha Cube Weelka Isku-biyo-dhaca - Kaydka Biyaha Bilaashka ah ee BPA (oo leh Spigot) - Kaiguan
Xiga: Weelka Biyaha Bilaashka ah ee BPA (oo wata Spigot)
Qaab dhismeedka Cubic
Bacda Cubitainer Sanduuqa loogu talagalay Adblue
5 litir bacda qalabka 'ultrasound'
KAIGUAN alaabooyinka baakadaha ugu waawayn waa sheer (bac toosan oo sanduuqa ku jira), cubpeainer ldpe, weel biyo ah oo laysku ridi karo, jeeriga tuutaha ah iyo mashiinada wax lagu buuxiyo
Maya. 15, Niutang Town, Degmada Wujin, Magaalada Changzhou, Gobolka Jiangsu, Shiinaha.